29.04.2020 09.01.2021 admin Spiritual
Wuxuu ku dhintay Gindhir Labo ilmo-Garaad: Ilmo Garaad Cali. Cabdul: Cabdul Suldaan Cilmi Xaaseey. Waxaa dilay Ingiriis, waxaana lagu dilay Ceeldheer Carab: Waxaa loo maleynayaa Carab Maxamad Ciise. Cumar Dabagabooye: Kuray aan weyneyn oo Dariiqada joogay buu ahaa ee gabayga uun baa iska qabsaday.
Author: Faektilar Yokus
Sayidka magaalada Maka waxaa ay isku arkeen wadaad Suudaani ah oo Saalix lagu magacaabi jiray, Sayidka waxaa uu ahaa Saalixiya oo ah dhariiqo ka tirsan Suufiyada.
Sidaa daraadeed waxaa ingiriisku ku magcaabay wadaadkii waalaa. Daraawiish labaatan sano ayey duurka ku jirtay, mar la jabiyo iyo marar ay guulaystaan, Xabashi, Ingiriis iyo Talyaani intaba foodda ayey is-dareen, heshiisyo badan ayey galeen, dhamaan guuldaro ayey ku dhamaadeen. Ingiriiska intii ay socdeen labadii duulimaad ee horre waxaa u korodhay waayo-aragnimo dheeraad ah waxayna ogaadeen xoogga Daraawiishta oo ah mid aan dhayal loo loodin karin.
July 3, dii waxaa dhamaaday dagaalkii saddexaad oo intuu socday Sayidka iyo Ingiriisku Bari iyo Waqooyiba ku dagaalameen. Goobihii laysaga horyimid intii duulimaadyadaasi socdeen oo Daraawiishta iyo Ingiriisku isku haleeleena waxaa ka mid ahaa Beerdiga, Cagaarweyne, Daratoole, Taargooye, iyo Jidbaale.
Dawlada Ingiriisku waxay isku dayday inay Sayidka kula isticmaasho siyaasad la mid ah tii boqoradii Hindida ay kula dhaqantay oo ah inay maal badan iyo mushaaro joogta ah siiso. Dagaallada caanka ah ee dhacay waxaa ka mid ahaa dagaalkii lagu dilay taliyihii ciidamada Ingiriiska Richard Corfield, gaalkaasi oo Soomalidu u taqaanay Koofil ahaana ninkii Sayidku ka tiriyey gabaygii caanka ahaa, ee Adaa Koofiloow Jiitayoon.
Sayidku wuxuu ku caan baxay tabco iyo taaktiko dagaal. Ugu dambayntii waxaa Sayidka lagu soo kacshay dayuuraadka dagaalka waxaana weeraradaa hogaaminayey Dhame Duuliye Gordon wuxuuna cadowgu isticmaalayey diyaaradaha noocoodu ahaa DH9, waxayna duqeeyeen Taleex, Jiidali iyo xarumihii Sayidka oo dhan.
Sidaa darteed, Daraawiishtu waxay ahaayeen urur gobonimo doon ah ee adduunyada ugu horeeyey ee dayuuradaad lagula dagaalamo. Sayid Maxamed intaa kadib wuxuu soo aaday Koonfur. Geeridii Sayid Maxamad. Ugu Dambeyn Sayidka Maxamed geeridiisa waxaa laga joogaa 95 sano, dadkii uu Sayidka dagaalka kula jiray Muqdisho ayey nala joogaan, Caddaankii waxaa ay noqdeen Saxiib halka Madowgii isku badaleen Walaal.
Tusaale ahaan: Xabashi oo waagaas cadaw aheyd, dagaallo badan uu la galay Sayidka, waxaa ay noqotay Walaal, waxaa loo cabsadanaa in dagaalkii 77 ama dagaalkii xoreyntii Soomaali Galbeed in loo badalo in uu ahaa dagaal sokeeye oo dhexmaray labada dal ee walaalaha ah ee Soomaaliya iyo Itoobiya….
Mokhtar M. Magaalada: Hargeysa, Somaliland. Sayidka waxaa uu noolaa mudadii u dhaxeysay , waxaa uu ahaa Hogaamiyhii Darwiish, lana dagaalamay gumaystayaashii Ingiriika, Talyaaniga iyo Xabashida, isagoo kula dagaalay dhulka looga yaqaano Somaliland, Nugaal iyo Taleex. Taariikhdii Dhalasha Iyo Caruurnimadii Sayid Maxamed Cabdille Xasan Waxaa la weriyey Shiikh Cabdille oo ah Sayidka aabihii isagoo 26 jir ah inuu guursaday gabadha la yidhaahdo Timiro Seed Magan, kuna caan baxdey "Caro Seed" waxaa la yidhi, waxay u dhashay 10 caruur ah, waxaana u weynaa sayid Maxamed, hase ahaatee Shiikh Cabdille carruurtii uu dhalay ayaa waxa la sheegaa inay tiradoodu gaadhaysay sodomeeyo. Shiikh Cabdille Xasan Daraawiish dhiskeedii waa ka qayb galay, dagaallada badankoodiina waa ka tala galay, waxuuna ku dhintay xaruntii Daraawiishta "Baraawe" , qabrigiisuna waxa laga dhisay qudbad Qudbi caan ah. Maxamed Cabdulle Xasan waxuu ku dhashay dhulka loo yaqaan Ciid-mudug oo ah agagaarka Degmada Buhoodle balliga la yidhaahdo "Sacmadeeqo" oo magaalada Buhoodle toddoba mayl u jirta kana xigta dhinaca waqooyi.